ကြယ်ပြာရဲ့ အိမ်ကလေး: December 2013
" ဟေ့ရောင် "
အထီးကျန်မှုကို ပိုးမွေးသလို မမွေးစမ်းနဲ့ …
နင့်ရင်ထဲ ငါရှိနေသရွေ့၊ ငါ့ရင်ထဲ နင်ရှိနေသမျှ
ငါတို့နား ပွတ်သီး၊ပွတ်သပ် လုပ်ခွင့်မရှိစေရဘူး …
ကိုယ့်ကိုကိုယ် ရဲရင့်ပစ်လိုက်စမ်းပါ …
မတွန့်ဆုတ်နဲ့ .. ပျာယီးပျာယာမရှိစေနဲ့ ….
"နင့်ကို ငါချစ်တယ် ....."
မျက်စိမှိတ်ပြီး ကြည်နူးမှုကို ခံယူစေ ….
Posted by ကြယ်ပြာ at 9:03 AM 1 comments Links to this post
" သူ့ကို "
သူ့ရင်ထဲကလှိုင်းတွေ ငါ့ရင်ထဲအလိုလိုကို ဖမ်းမိလျက်သား။
ငါ့ရင်ထဲမှာ မိုးတွေပဲပြိုကျနေသလိုလို ….
သူ့ညတွေ လမိုက်ပြီ ဆိုရင်
ငါက သူ့ညမိုက်တွေထဲ အစွမ်းကုန်လင်းချင်းပစ်လိုက်ချင်တဲ့
ခပ်တုံးတုံး ပိုးစုန်းကြူးတစ်ကောင်ရယ်ပါ ….
ငါက သူ့အပျော်တွေကို ပုတ်နှိုး၊
ပျော်ရွှင်မှုတွေနဲ့ သူ့အပြုံးလေးတွေကို နိုးထစေချင်သူပါ ……..
ငါက တောက်ပခွင့်မရတဲ့ နေ့ဘက်ထွက်တဲ့ ကြယ်တစ်စင်းဖြစ်နေပါစေ
သူ့အပျော်တွေ ဓါတ်ကူးပြီး သူ့ကို ပြုံးကြည့်နေမိမှာပါ …..
Posted by ကြယ်ပြာ at 9:00 AM0comments Links to this post
အချစ်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲ - အချစ်ဆိုတဲ့အရာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးတဲ့နောက်မှာ..ကိုယ်တွေနှစ်ယောက်..ဘဝဆိုတဲ့ခရီးလမ်းပေါ်မှာ..မျှော်လင့်ချက်၊ယုံကြည်ချက်၊ကြင်နာဖေးမှုတွေနဲ့အတူ..တနေဝင်၊တနေထွက်..လေ...